Nnyocha mgbasa ozi ọha na eze na-ekwu, sị: Ndị nwe ha ịrị elu | Martech Zone
Fraịde, Ọgọstụ 19, 2011 Tuesday, October 4, 2011 Bọọlụ Lorraine
Dị ka Nnyocha nyocha obere mgbasa ozi obere azụmahịa nke 2011, ndị nwe ụlọ ọrụ na-ewere usoro mgbasa ozi dị mkpa karịa afọ gara aga. N'ime nyocha emere site na Mee 1, 2011 - Julaị 1, 2011 anyị jụrụ ndị nwe obere azụmaahịa 243 (ụlọ ọrụ nwere ihe na-erughị ndị ọrụ 50) ndị na-ekepụta ọdịnaya maka akaụntụ mgbasa ozi ha.
Ndị nwe ya na-ewere ụgwọ
Site na nzaghachi ha, o doro anya na ndị nwe ha na-ewere mgbasa ozi mmekọrịta dị ka ihe karịrị 65% gosiri na ha na-arụsi ọrụ ike n'ịmepụta ọdịnaya. Onu ogugu a di otutu n'etiti ndi nwere obere ulo oru di iche iche, rue mgbe anyi lere ulo oru anya karie ndi oru iri abuo na ise.
Agbanyeghị na ntinye aka ha malitere ida, 50% nke ndị nwe ụlọ ọrụ ndị a ka nọ. O doro anya, agbanyeghị, ndị isi a na-ekenye ndị ọzọ ọrụ maka mgbasa ozi mmekọrịta mmekọrịta.
Onye nwere ihe omuma ihe omuma
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-abanye na mgbasa ozi mmekọrịta, mmemme ha anaghị adaba n'ihi na ha anaghị akọwapụta ọrụ n'ụzọ doro anya. Ha anaghị ekpebi onye ga-emepụta ọdịnaya, ugboro ole yana ihe.
Enwere m mmechuihu ịhụ karịa ½ ụlọ ọrụ ndị a na-amụ anaghị agba ndị ahịa ume na atụmanya dị ka ndị na-eweta ọdịnaya.
Site na nleba anya na nyocha, na Ajụjụ na mkparịta ụka, ụlọ ọrụ na-efu nnukwu ohere site na ịghara itinye aka na mpaghara ndị a.
Ọ bụghị Intern
Ọ bụ ezie na ọ dị iche site na ụlọ ọrụ enwere ihe ngosi siri ike na-ewere mmekọrịta ọha na eze na 2011. Dịka ọmụmaatụ: Tụlee ọrụ nke ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ. Na nyocha 2010 Facebook anyị, ihe karịrị 80% nke azụmaahịa ndị nwere ndị ọrụ nọ na-egosi na onye ọrụ ahụ metụtara na mgbasa ozi ọdịnaya mmekọrịta.
Nye anyị, nke a rụtụrụ aka na ụlọ ọrụ eziokwu ahụ anaghị eji ngwaọrụ akpọrọ ihe. Ọ bụrụ na ha nwere, ha agaghị adabere na onye otu kachasị nwee ahụmịhe nke otu ha ga-eduga mmepe ọdịnaya. N'ime ọmụmụ ihe afọ a, naanị 30% nke ụlọ ọrụ nwere interns gosipụtara na ha tinyere aka na okike ọdịnaya.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nwe ụlọ ọrụ kwenyere na mgbasa ozi ọha na eze na-eme ya n'onwe gị ụdị ọrụ, enwere mmasị na-arịwanye elu n'ịgba ahịa na ụlọ ọrụ mgbasa ozi iji kwado mgbalị ha. Na mkpokọta, ihe dịka 10% nke ụlọ ọrụ dị na nyocha ahụ gosipụtara na ụlọ ọrụ dị na mpụga nọ na-arụsi ọrụ ike na mmemme mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ ahụ. Ka m na-atụ anya na nnukwu ụlọ ọrụ ga-ele anya n'èzí maka enyemaka, ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ dị na mpaghara 6-10 na-elekwa anya na mpụga.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ iri abụọ na otu - 11 enweghị ike iji ụlọ ọrụ dị n'èzí. N'ihi gịnị? Anyị na-eche na nha a, ụlọ ọrụ nwere onye na-arụ ọrụ na oge iji rara ihe omume mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Dika aturu anya, ndi kachasi n'ime ulo oru ndia gha enwekwa onye oru ha raara onwe ya nye. Ihe ndị a na-egosipụtakwa esemokwu dị n'etiti ime-ya-onwe gị na ịgbazite-a-pro camp.
Kedu ihe ndị nwe ụlọ ahịa na-ekwu gbasara inweta enyemaka na soshal midia?
Hụ mmadụ ka o mepụta akaụntụ ahụ ma kuziere gị otu esi ejikwa ha nke ọma. O siri ike iso ha niile n'oge ejiji.
Nwee professorial ime gị Social Media. Were otu CPA n'ihi na ị nweghị ike ịme nyocha, were onye ọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ.
Thesebọchị ndị a onye ọ bụla bụ "onye ọkachamara n'ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya" ị maara dị ka ha.
Iku onye nwere ike ịkụziri gị, nweta ngwaọrụ mgbasa ozi mmekọrịta na-arụ ọrụ nke kwekọrọ na akara gị.
Nabata soshal midia mana ị ga-abụ ndị na-ahụ maka mgbasa ozi "ndị ọkachamara" na ndị ọkachamara.
Ga-achọ otu nnomi nsonaazụ nyocha zuru ezu? Cannwere ike ibudata site na Roundpeg, ụlọ ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta Indianapolis.